Daafaca Liverpool Trent Alexander-Arnold Oo Laga Helay Cudurka 'coronavirus'
HomeWararka CiyaarahaDaafaca Liverpool Trent Alexander-Arnold oo laga helay cudurka ‘coronavirus’
Daafaca Liverpool Trent Alexander-Arnold oo laga helay cudurka ‘coronavirus’
January 10, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska 0
Trent Alexander-Arnold ayaa noqday ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee Liverpool ee laga helo coronavirus ah.
Reds ayaa lagu qasbay inay xidhaan xarumahooda tababarka ka dib koox dhowaan soo baxday oo COVID-19 ah, taasoo qasabtay in dib loo dhigo lugtii hore ee semi-finalka EFL Cup ee Arsenal.
Kooxda Jurgen Klopp ayaa tan iyo markii ay ka soo kabsadeen cudurka dillaacay si ay u arkaan Shrewsbury Town wareegii saddexaad ee FA Cup, laakiin Alexander-Arnold kuma lug lahayn ka dib markii uu ku dhacay fayraska.
Si kastaba ha ahaatee, Sky Sports News ayaa sheegeysa in xiddiga heerka caalami ee dalka England uu soo kabsan karo waqtiga si uu uga hor tago Gunners kulanka dib loo qorsheeyay ee lugta hore ee EFL Cup-ka Khamiista.
Klopp ayaa sidoo kale ku soo laabtay ciyaarta isbuucaan ka dib markii uu ka soo laabtay go’doon, halka Joel Matip iyo Roberto Firmino ay labaduba taam u ahaayeen boosaska kursiga keydka.
Liverpool ayaa ku aaday kooxda Cardiff City wareega 4-aad ee FA Cup-ka kadib markii ay 4-1 ku garaacday Shrewsbury kulan ka dhacay Anfield.